Kusvira musikana wangu nebestfriend yake on my Birthday! – Makuhwa.co.zw
Akanga arimakuseni ebirthday rangu, I had gone out drinking the night before for an early celebration.
I was in bed hangu ndakarohwa nehangover serious ndisina kana kupfeka. My girlfriend Fay was not in bed next to me saka ndakafunga kuti ambobuda hake for a jog or arikubika breakfast.Ndakatarisa nguva ndikaona kuti it was already 9:30am since rainge riri birthday rangu I decided kumbozama kugara in bed before ndauya kuzomutswa na Fay aigara achizviita. I tried kuvhara maziso for more sleep but ndakatadza kurara instead ndakanzwa Fay in the other room achiti “Shhh… he’s still asleep.”
Ndakatanga kufunga kuti ndiani awuya early in the morning on my birthday asi handina kubuda mumagumbezi, I just pretended kunge munhu achiri akarara. I felt the bed shake a little bit, and I heard the sound of Fay’s breathing. I smiled, but handina kuvhura maziso. Ndakabva ndanzwa kakuseka but it was Fay’s voice, it was another girl. Ndakavhura maziso ndikaona Fay achipinda mublanket nekumakumbo ari musvo asina kana chinhu. Fay is medium built ane mazigaro nemazamu mahombe and she is 22 years old. Her waist is
tight, and her legs are toned from years of running. She has blue eyes, and beche rake is always clean shaved.
The other girl it was shamwari yake Alex who is also 22 with also blue eyes, shave beche she has a very mischievous smile, she always looks like she’s about to do something naughty ainge asina kupfeka anything as well.
Fay akapinda nekuright kwangu akatanda kundiguma guma nemazamu ake, ndakabva ndatanga kunadzwa minyatso yake as she leaned over. Alex akapinda nekumakumbo kwangu akamira asvika pamboro I couldn’t even see face yake. Fay akatanga kundikisa, Alex akabva abvisa blanket achindisiya ndisina kana chinhu apa mboro yangu yainge yakamira kuita kunge simbi yakatarisa mudenga. Alex akatora zimboro rangu straight muuromo akanga kuidya softly achitambisa rurimi rwake pamboro yangu. Fay akabva ati “Good morning, baby” ndokuenderera mberi nekundi kisser.
I reached across my chest with my left hand ndikatanga kubatabata minyatso yaFay, apa Alex aingodya mboro yangu.Alex placed her elbows on opposite sides of my right thigh, ipapo akabva atanga kudya mboro zvine speed. Fay got excited nezvaitwa na Alex then she said its now my turn achibva atanga kundidyawo mboro. Fay akaramba achidya mboro for some minutes ndokumira I didn’t understand what was going on. Fay naAlex vakaenda vese kumakumbo ebed vakabva vafongorora vakati ndiuye nemboro yangu. Ndakatanga kuisa mboro mumuromo waFay akatanga kutamba nayo then mumuromo maAlex akatanga kuidyawo nguva yese iyi tainge takatarisana tese takapfungama pabed. Alex akatanga kutambisa machende angu apa Fay achidya mboro ini ipapo ndainge ndakangotarisa magaro avo, aFay were big but Alex ake were just tight.
I could tell that they were both getting very excited and impatient, and probably needed kuda kusvirwa very soon. Ndakasverera mazamu aAlex and akabva anditarisa ndokudzokera kunodya mboro. Communication yavo was very good zviya zvekunge they had talked about it or kunge vakambozviita vese. Alex removed her right hand from machende angu ndokuisa mboro mukanwa. Fay became jealous nekudyiwa kwaiita Alex mboro and akaitora again ndokutanga kuidya. Izvi ndakaona kunge zvisina kufadza Alex since ainge achitanga kuidyawo again.
Scroll down to the bottom for page 2
Related Topics:Kusvira musikana wangu